ပထမဇနီးကွယ်လွန်ပြီးမှ မွေးစားခံရသော သားသမီးသည် မွေးစားဖခင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုသော် အမွေရခွင့်ရှိပါသလား ? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ပထမဇနီးကွယ်လွန်ပြီးမှ မွေးစားခံရသော သားသမီးသည် မွေးစားဖခင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုသော် အမွေရခွင့်ရှိပါသလား ?
8 Nov 2019 1:04 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
1656 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
ရုံးခန်းသို့ စာရေးသူရောက် သည့်အခါ ကျောင်းနေဖက်ငယ်သူ ငယ်ချင်း ဦးတင်မြင့်ကို တွေ့ရသည်။
“သူငယ်ချင်း ရောက်နေတာ ကြာပြီလား”ဟု စာရေးသူက ကြိုဆို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။
“မကြာသေးပါဘူး။ သူငယ်ချင်း တရားရုံးမသွားမီ အရောက်လာခဲ့တာ”
“လာ သူငယ်ချင်းထိုင်၊ အရေးတကြီး ကိစ္စရှိလို့လား”
“အရေးကြီးတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆွေးနွေးထားတာ ကောင်းမယ်ထင်လို့”
“အခု ပင်စင်ယူလိုက်ပြီ မဟုတ်လား”
“သူငယ်ချင်းရဲ့ ဇနီးဆုံးစဉ်က တစ်ခေါက်ပဲ သူငယ်ချင်းရဲ့ အိမ်ကို ရောက်ခဲ့တာ။ အခု အဲဒီအိမ်မှာနေ တာ မဟုတ်လား”
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဇနီးကွယ်လွန်တာ ငါးနှစ်ကျော်သွားပြီ”
“သူငယ်ချင်းမှာ သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ် မဟုတ်လား”
“အတူနေတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား။ သူ့ခင်ပွန်းက အင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ နယ်ဘက်မှာ တာဝန်ကျတယ်။ ဇနီးဖြစ်လာတော့ အတူလိုက် နေရတာပေါ့”
“ဒါဆို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်တယ်လို့ ကြားပါတယ်”
“ဟုတ်ပါတယ်။ စာရင်းကိုင်ချုပ် အဖြစ် အခုတိုင်လုပ်နေဆဲပါ”
“ကောင်းပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက ကျန်းမာသန်စွမ်းနေဆဲဆိုတော့ ပိုပြီး အဆင်ပြေမှာပါ”
“အထီးကျန်တဲ့ ဝေဒနာသက် သာတာပေါ့လို့ ပြောရမှာပဲ”
“ဟုတ်တယ်။ အသက်ကြီးရင့် လာတာနဲ့အမျှ အထီးကျန်တဲ့ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတိ်္တရှိဖို့ အမြဲမွေးမြူ ထားရတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ကိုယ်ဝါသနာပါရာလုပ်ငန်း လူမှုရေး အသိုက်အ၀န်းနဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေကို ၀င်ရောက်ဆောင်ရွက်တတ်ရတယ်”
“ဟုတ်ပါတယ်။ အလုပ်ကလေးရှိတော့ ပတ်ဝန်းကျင်လူ့အသိုက်အ၀န်းနဲ့ အဆက်မပြတ်တော့ဘူးပေါ့”
“သမီးက လာလိုက်သွားလိုက်တော့ရှိတယ် မဟုတ်လား”
“လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတော့ မနေနိုင်ဘူးပေါ့”
“ဟုတ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်တော့လည်း သူ့လမ်းသူသွားကြတာ ဓမ္မတာပဲလေ။ အပြစ်တင်လို့တော့ မဖြစ်ဘူး ပေါ့။ မိဘတိုင်းကြုံတွေ့ကြရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်လား”
“မှန်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းမို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင် သမီးအရင်း မဟုတ်ဘူး”
“ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူနေ တာ မဟုတ်လား။ သမီးရင်းလို့ပဲ သိထားတာ”
“ကိုယ့်အစ်မရဲ့ သမီးဆိုတော့ တူမတော့ တော်စပ်ပါတယ်။ အစ်မက သူမွေးဖွားပြီး တစ်နှစ်ခန့်မှာ ဆုံး ပါးသွားတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကလည်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တော့ သားသမီးမရသေးတဲ့ တို့လင်မယား နှစ်ယောက်က ခေါ်မွေး စားလိုက်တယ်ဆိုပါတော့”
“စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ ကိတိ်္တမသားသမီးအဖြစ် မွေးစားခဲ့တာ မဟုတ်လား”
“မူလကတော့ စာချုပ်စာတမ်း ပြုလုပ်မထားကြဘူး။ တို့ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ကလည်း သားသမီးရ လိမ့်နိုးနဲ့ မျှော်လင့်ရင်းနေလာခဲ့တာ ဇနီးဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အထိ ဆိုပါတော့။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘက်က ဆွေမျိုးဖြစ် နေတော့ ဇနီးသည်ကို အမွေစားအမွေခံအဖြစ် မွေးစားပါလို့ ပြောရမှာအားနာနေတာလည်း ပါတယ်ပေါ့ သူငယ်ချင်းရယ်”
“အခုလည်း သမီးတစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ သူငယ်ချင်းမရှိခဲ့ရင်လည်း သူပဲ ရပိုင်ခွင့်ရှိမှာလေ။ ဘာပြဿနာ ရှိမှာလဲ”
“သာမန်မွေးစားသားသမီးဆိုရင် မွေးစားမိဘကွယ်လွန်သွားပါက အမွေအားလုံးမရဘူးလို့ လေ့လာသိရှိလိုက် တယ်။ ဥပဒေအရ အမွေအကုန်မရဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား”
“ဥပဒေအရပြောရမယ်ဆိုရင် အမွေစားအမွေခံအဖြစ် စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပြီး ကိတိ်္တမသားသမီး အဖြစ် မွေးစားခြင်း မဟုတ်က အပတိဌ (ကောက်ယူမွေးစားခြင်း) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူကတော့ အမွေဆက်ခံ ခွင့် အခွင့်အရေးတစ်ဝက်ပဲရတယ်”
“မွေးစားမိဘမှာ သား၊ သမီး၊ မြေး၊ မြစ်နဲ့ ကိတိ်္တမမွေးစားသားသမီး များမရှိတဲ့အခါမှသာ အပတိဌ (ကောက်ယူ မွေးစား) သားသမီးက အမွေခံစားခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်တယ်။ အမွေ ဝေစုမှာလည်း ထက်ဝက်သာဖြစ်ပြီး ကျန်ထက်ဝက် ကို မွေးစားမိဘရဲ့ ဆွေမျိုးများက ရခွင့်ရှိတယ်လို့ ဥပဒေအရ အတိအလင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အဲဒီအမွေ ထက်ဝက်ဟာလည်း မွေး စားမိဘနှစ်ပါးလုံး ကွယ်လွန်မှရပိုင် ခွင့်ရှိတယ်လို့ တရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ မဆင့်နှင့် မမကလေး၊ ၁၉၃၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်စီရင်ထုံး စာမျက်နှာ - ၃၇၈ မှာ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်”
“အဲဒါနဲ့ ကိုယ့်တို့ ဇနီးမောင်နှံမရှိရင် အခက်အခဲရှိမှာပဲလို့ တွေးဆပြီး ဇနီးဖြစ်သူ ကွယ်လွန်တော့ ကိုယ် တစ်ဦးတည်းက မွေးစားစာချုပ် မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ် မွေးစားခဲ့တယ်”
“ဒါဆိုရင်ပိုကောင်းသွားတာပေါ့။ စိတ်အေးသွားရပြီ မဟုတ်လား”
“ဒါပေမယ့် အခြေအနေက ပြောင်းသွားတယ် သူငယ်ချင်း”
“ပြောပါဦး ပြောင်းလဲချိန် ရောက်သွားပြီဆိုပါတော့”
“ဟုတ်ပြီလေ၊ ဒါလည်း ပြဿနာတော့ မရှိပါဘူး။ သမီးရဲ့ အိမ် ထောင်ဖက်ကို သူငယ်ချင်းက သဘောမတွေ့ လို့လား”
“ဒီလိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ တို့ကိုယ်တိုင် မကြာခင် နှစ်လခန့်က နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်လို့”
“သြော် ဒီလိုကိုး၊ ပြောင်းလဲချိန် ရောက်သွားပြီဆိုပါတော့””
စာရေးသူက ဦးတင်မြင့်ကို ရယ် ရယ်မောမော ပြောလိုက်မိသည်။
“သမီးဖြစ်သူက သူ့အမေဝေစုကို အမွေခွဲပေးဖို့ တောင်းဆိုနေလို့ သူငယ်ချင်း”
“အမေ့ဝေစုဆိုတာ ဘယ်အမေ့ ဝေစုလဲ”
“သူ့အမေအရင်းဆီက ဝေစုက မရလိုက်ဘူး။ အိမ်ထောင်ပြုခါစဆိုတော့လည်း ဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတော့ အဖေရင်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုပေမယ့် ဘာအမွေမှ မရလိုက်ဘူး။ ဒီတော့လည်း မွေးစားမိခင်ကိုယ့်ရဲ့ ဇနီးဝေစုကိုတောင်းတာပေါ့ သူငယ်ချင်းရယ်။ ဘယ်လိုရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ သိချင်လို့”
“သူငယ်ချင်းရဲ့ ဇနီးကွယ်လွန်မှ သူ ငယ်ချင်းတစ်ဦးတည်းက ကိတိ်္တမ စာချုပ် ချုပ်ဆို မွေးစားတာ မဟုတ် လား။ ဒါကြောင့် ဥပဒေအရပြောရရင်တော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ဇနီးနဲ့က ကိတိ်္တမသမီးအဖြစ် မရောက်ခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားလွှတ်တော်ချုပ်က ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဒေါ်ခင်မာချိုနှင့် ဦးညွန့်အောင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး၊ စာမျက်နှာ ၁၆ မှာ ပထမဇနီး ကွယ်လွန်ပြီး ဖခင်တစ်ဦးတည်း ကိတိ်္တမစာချုပ်ဖြင့် မွေးစားခြင်းခံရသူသည် မွေးစားဖခင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုချိန်တွင် ဖခင်ထံမှ အမွေတောင်းခွင့်မရှိလို့ ဆုံး ဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်း မစိုးရိမ်နဲ့။ သူငယ်ချင်း ကွယ်လွန်မှသာ ဖခင်ရဲ့ ဝေစုကို မိထွေး ဖြစ်သူထံမှ တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိမယ်”ဟု အကြံပြုဆွေးနွေးလိုက်ပါသည်။
ရုံးခနျးသို့ စာရေးသူရောကျ သညျ့အခါ ကြောငျးနဖေကျငယျသူ ငယျခငျြး ဦးတငျမွငျ့ကို တှရေ့သညျ။
“သူငယျခငျြး ရောကျနတော ကွာပွီလား”ဟု စာရေးသူက ကွိုဆို နှုတျဆကျလိုကျပါသညျ။
“မကွာသေးပါဘူး။ သူငယျခငျြး တရားရုံးမသှားမီ အရောကျလာခဲ့တာ”
“လာ သူငယျခငျြးထိုငျ၊ အရေးတကွီး ကိစ်စရှိလို့လား”
“အရေးကွီးတယျတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဆှေးနှေးထားတာ ကောငျးမယျထငျလို့”
“အခု ပငျစငျယူလိုကျပွီ မဟုတျလား”
“သူငယျခငျြးရဲ့ ဇနီးဆုံးစဉျက တဈခေါကျပဲ သူငယျခငျြးရဲ့ အိမျကို ရောကျခဲ့တာ။ အခု အဲဒီအိမျမှာနေ တာ မဟုတျလား”
“ဟုတျပါတယျ။ ဇနီးကှယျလှနျတာ ငါးနှဈကြျောသှားပွီ”
“သူငယျခငျြးမှာ သမီးတဈယောကျရှိတယျ မဟုတျလား”
“အတူနတေယျလို့ပဲ ပွောရမလား။ သူ့ခငျပှနျးက အငျဂငျြနီယာဆိုတော့ နယျဘကျမှာ တာဝနျကတြယျ။ ဇနီးဖွဈလာတော့ အတူလိုကျ နရေတာပေါ့”
“ဒါဆို သူငယျခငျြးတဈယောကျ တညျးဖွဈနတောပေါ့။ ကုမ်ပဏီတဈခုမှာ အလုပျဝငျတယျလို့ ကွားပါတယျ”
“ဟုတျပါတယျ။ စာရငျးကိုငျခြုပျ အဖွဈ အခုတိုငျလုပျနဆေဲပါ”
“ကောငျးပါတယျ။ သူငယျခငျြးက ကနျြးမာသနျစှမျးနဆေဲဆိုတော့ ပိုပွီး အဆငျပွမှောပါ”
“အထီးကနျြတဲ့ ဝဒေနာသကျ သာတာပေါ့လို့ ပွောရမှာပဲ”
“ဟုတျတယျ။ အသကျကွီးရငျ့ လာတာနဲ့အမြှ အထီးကနျြတဲ့ဘဝကို ရငျဆိုငျရဲတဲ့ သတ်တိရှိဖို့ အမွဲမှေးမွူ ထားရတယျ။ ဒါမှမဟုတျရငျ ကိုယျဝါသနာပါရာလုပျငနျး လူမှုရေး အသိုကျအဝနျးနဲ့ ဘာသာရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးတှကေို ဝငျရောကျဆောငျရှကျတတျရတယျ”
“ဟုတျပါတယျ။ အလုပျကလေးရှိတော့ ပတျဝနျးကငျြလူ့အသိုကျအဝနျးနဲ့ အဆကျမပွတျတော့ဘူးပေါ့”
“သမီးက လာလိုကျသှားလိုကျတော့ရှိတယျ မဟုတျလား”
“လာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမွဲတော့ မနနေိုငျဘူးပေါ့”
“ဟုတျပါတယျ။ အရှယျရောကျတော့လညျး သူ့လမျးသူသှားကွတာ ဓမ်မတာပဲလေ။ အပွဈတငျလို့တော့ မဖွဈဘူး ပေါ့။ မိဘတိုငျးကွုံတှကွေ့ရတဲ့ ကိစ်စမဟုတျလား”
“မှနျပါတယျ။ သူငယျခငျြးမို့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရမယျဆိုရငျ သမီးအရငျး မဟုတျဘူး”
“ငယျငယျကတညျးက အတူနေ တာ မဟုတျလား။ သမီးရငျးလို့ပဲ သိထားတာ”
“ကိုယျ့အဈမရဲ့ သမီးဆိုတော့ တူမတော့ တျောစပျပါတယျ။ အဈမက သူမှေးဖှားပွီး တဈနှဈခနျ့မှာ ဆုံး ပါးသှားတယျ။ ခငျပှနျးဖွဈသူကလညျး နောကျအိမျထောငျပွုလိုကျတော့ သားသမီးမရသေးတဲ့ တို့လငျမယား နှဈယောကျက ချေါမှေး စားလိုကျတယျဆိုပါတော့”
“စာခြုပျစာတမျးနဲ့ ကိတ်တိမသားသမီးအဖွဈ မှေးစားခဲ့တာ မဟုတျလား”
“မူလကတော့ စာခြုပျစာတမျး ပွုလုပျမထားကွဘူး။ တို့ဇနီးမောငျနှံ နှဈယောကျကလညျး သားသမီးရ လိမျ့နိုးနဲ့ မြှျောလငျ့ရငျးနလောခဲ့တာ ဇနီးဖွဈသူ ကှယျလှနျသှားတဲ့အထိ ဆိုပါတော့။ ပွီးတော့ ကိုယျ့ဘကျက ဆှမြေိုးဖွဈ နတေော့ ဇနီးသညျကို အမှစေားအမှခေံအဖွဈ မှေးစားပါလို့ ပွောရမှာအားနာနတောလညျး ပါတယျပေါ့ သူငယျခငျြးရယျ”
“အခုလညျး သမီးတဈယောကျတညျးဆိုတော့ သူငယျခငျြးမရှိခဲ့ရငျလညျး သူပဲ ရပိုငျခှငျ့ရှိမှာလေ။ ဘာပွဿနာ ရှိမှာလဲ”
“သာမနျမှေးစားသားသမီးဆိုရငျ မှေးစားမိဘကှယျလှနျသှားပါက အမှအေားလုံးမရဘူးလို့ လလေ့ာသိရှိလိုကျ တယျ။ ဥပဒအေရ အမှအေကုနျမရဘူးလို့ ပွောကွတယျ။ အဲဒါ ဟုတျပါသလား”
“ဥပဒအေရပွောရမယျဆိုရငျ အမှစေားအမှခေံအဖွဈ စာခြုပျစာတမျး မှတျပုံတငျပွုလုပျပွီး ကိတ်တိမသားသမီး အဖွဈ မှေးစားခွငျး မဟုတျက အပတိဌ (ကောကျယူမှေးစားခွငျး) လို့ ချေါပါတယျ။ သူကတော့ အမှဆေကျခံ ခှငျ့ အခှငျ့အရေးတဈဝကျပဲရတယျ”
“မှေးစားမိဘမှာ သား၊ သမီး၊ မွေး၊ မွဈနဲ့ ကိတ်တိမမှေးစားသားသမီး မြားမရှိတဲ့အခါမှသာ အပတိဌ (ကောကျယူ မှေးစား) သားသမီးက အမှခေံစားခှငျ့ရှိမှာ ဖွဈတယျ။ အမှေ ဝစေုမှာလညျး ထကျဝကျသာဖွဈပွီး ကနျြထကျဝကျ ကို မှေးစားမိဘရဲ့ ဆှမြေိုးမြားက ရခှငျ့ရှိတယျလို့ ဥပဒအေရ အတိအလငျးသတျမှတျထားပါတယျ။ အဲဒီအမှေ ထကျဝကျဟာလညျး မှေး စားမိဘနှဈပါးလုံး ကှယျလှနျမှရပိုငျ ခှငျ့ရှိတယျလို့ တရားရုံးခြုပျက ဆုံးဖွတျထားတဲ့ မဆငျ့နှငျ့ မမကလေး၊ ၁၉၃၉ ခုနှဈ ရနျကုနျစီရငျထုံး စာမကျြနှာ - ၃၇၈ မှာ ဆုံးဖွတျထားပါတယျ”
“အဲဒါနဲ့ ကိုယျ့တို့ ဇနီးမောငျနှံမရှိရငျ အခကျအခဲရှိမှာပဲလို့ တှေးဆပွီး ဇနီးဖွဈသူ ကှယျလှနျတော့ ကိုယျ တဈဦးတညျးက မှေးစားစာခြုပျ မှတျပုံတငျပွုလုပျ မှေးစားခဲ့တယျ”
“ဒါဆိုရငျပိုကောငျးသှားတာပေါ့။ စိတျအေးသှားရပွီ မဟုတျလား”
“ဒါပမေယျ့ အခွအေနကေ ပွောငျးသှားတယျ သူငယျခငျြး”
“ပွောပါဦး ပွောငျးလဲခြိနျ ရောကျသှားပွီဆိုပါတော့”
“ဟုတျပွီလေ၊ ဒါလညျး ပွဿနာတော့ မရှိပါဘူး။ သမီးရဲ့ အိမျ ထောငျဖကျကို သူငယျခငျြးက သဘောမတှေ့ လို့လား”
“ဒီလိုတော့ မဟုတျဘူး။ တို့ကိုယျတိုငျ မကွာခငျ နှဈလခနျ့က နောကျအိမျထောငျပွုလိုကျလို့”
“သွျော ဒီလိုကိုး၊ ပွောငျးလဲခြိနျ ရောကျသှားပွီဆိုပါတော့””
စာရေးသူက ဦးတငျမွငျ့ကို ရယျ ရယျမောမော ပွောလိုကျမိသညျ။
“သမီးဖွဈသူက သူ့အမဝေစေုကို အမှခှေဲပေးဖို့ တောငျးဆိုနလေို့ သူငယျခငျြး”
“အမဝေ့စေုဆိုတာ ဘယျအမေ့ ဝစေုလဲ”
“သူ့အမအေရငျးဆီက ဝစေုက မရလိုကျဘူး။ အိမျထောငျပွုခါစဆိုတော့လညျး ဘာမှပိုငျဆိုငျမှုမရှိတော့ အဖရေငျး နောကျအိမျထောငျပွုပမေယျ့ ဘာအမှမှေ မရလိုကျဘူး။ ဒီတော့လညျး မှေးစားမိခငျကိုယျ့ရဲ့ ဇနီးဝစေုကိုတောငျးတာပေါ့ သူငယျခငျြးရယျ။ ဘယျလိုရပိုငျခှငျ့ရှိတယျဆိုတာ သိခငျြလို့”
“သူငယျခငျြးရဲ့ ဇနီးကှယျလှနျမှ သူ ငယျခငျြးတဈဦးတညျးက ကိတ်တိမ စာခြုပျ ခြုပျဆို မှေးစားတာ မဟုတျ လား။ ဒါကွောငျ့ ဥပဒအေရပွောရရငျတော့ သူငယျခငျြးရဲ့ ဇနီးနဲ့က ကိတ်တိမသမီးအဖွဈ မရောကျခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ တရားလှတျတျောခြုပျက ဆုံးဖွတျထားတဲ့ ဒျေါခငျမာခြိုနှငျ့ ဦးညှနျ့အောငျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံ တရားစီရငျထုံး၊ စာမကျြနှာ ၁၆ မှာ ပထမဇနီး ကှယျလှနျပွီး ဖခငျတဈဦးတညျး ကိတ်တိမစာခြုပျဖွငျ့ မှေးစားခွငျးခံရသူသညျ မှေးစားဖခငျ နောကျအိမျထောငျပွုခြိနျတှငျ ဖခငျထံမှ အမှတေောငျးခှငျ့မရှိလို့ ဆုံး ဖွတျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူငယျခငျြး မစိုးရိမျနဲ့။ သူငယျခငျြး ကှယျလှနျမှသာ ဖခငျရဲ့ ဝစေုကို မိထှေး ဖွဈသူထံမှ တောငျးပိုငျခှငျ့ရှိမယျ”ဟု အကွံပွုဆှေးနှေးလိုကျပါသညျ။
တောင်ဥက္ကလာပ နေရာကောင်း ဟံသာဝတီအိမ်ရာတွင်...
Classic Takhon Tower for Sale
Sale -Ayer Chan Thar Condo
ပေ(12.5 x 50)...